Ukuqala ngeShishini elikwi-Intanethi kuyo yonke into inye kwiDummies Cheat Sheet
Ngu-Shannon Belew, uJoel Elad
Ukuqala ishishini elikwi-intanethi okanye ukukhulisa ishishini esele likho e-commerce akufuneki ukuba kubenzima. Zininzi izibonelelo ezikhoyo zokukunceda wenze yonke into ekudaleni umxholo wewebhusayithi yakho ukwakha uluhlu olude lwabathengi abathembekileyo. Ukuba ngusomashishini onobuchule kwi-Intanethi kukwathetha ukufunda ukusebenzisa imithombo yeendaba ukukhuthaza ishishini lakho. Zama ezi ngcebiso kunye neengcebiso ezikhawulezayo zokuphehlelela iwebhusayithi yakho kunye nokubandakanya abathengi bakho.
Ungabakha njani abaThengi abathembekileyo kwi-Intanethi
Ukufumana ukugcwala, okanye iindwendwe, kwiwebhusayithi yakho linyathelo lokuqala lokwakha ishishini lakho kwi-Intanethi. Ukuze uphumelele, ufuna ukuguqula iindwendwe zibe kubathengi abagcina bebuyela kwindawo yakho. Sebenzisa ezi ngcebiso zilula ukwakha abalandeli abathembekileyo nabonelisekileyo kwishishini lakho elikwi-Intanethi:
Nika iindlela ezininzi zabathengi zokunxibelelana nawe (kubandakanya i-imeyile, umnxeba, inkxaso yexesha lokwenyani kwi-intanethi, iiforamu ezikwi-intanethi kunye nemithombo yeendaba zentlalo).
Sebenzisa ividiyo ukunika umbono ongcono weemveliso zakho okanye ukunika iingcebiso ngendlela yokusebenzisa iimveliso.
Bandakanya abathengi ngokubonelela ngeendlela zokunxibelelana nendawo yakho, njengokuthatha inxaxheba kuluntu oluku-intanethi, ukubhala uphononongo lwemveliso, kunye nokunika ingxelo kwiibhloko.
Nxibelelana nabathengi ngeendawo zosasazo lweendaba ezinje nge-Facebook, i-Twitter, i-YouTube, i-Instagram, kunye ne-LinkedIn kwaye ugcine abathengi benxibelelana nophawu lwakho lwe-Intanethi.
Yenza abathengi bazive bebodwa ngokuthumela izaphulelo zokunyaniseka kunye nezinye izibonelelo ezikhethekileyo kubasebenzisi bakho ababhalisiweyo okanye abathengi rhoqo.
Thumela abathengi iingcebiso okanye amanqaku amafutshane amnandi okanye amatsha okanye abonisa indlela yokusebenzisa iimveliso zakho okanye iinkonzo ukonga ixesha okanye ukuvelisa ngakumbi.
Nika abathengi iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula, kubandakanya neentlawulo ezimiselweyo, ukwenza ukuthenga kube lula.
Nikezela ngokuhambisa simahla-akukho zintambo ziqhotyoshelweyo.
Yenza kube lula ukubuyisa iimveliso.
Umvuzo wabathengi abaphezulu ngokufikelela kwiminyhadala ekhethekileyo kwi-Intanethi kwaye unikeze imbonakalo yes sneak yeemveliso ezintsha. Cela igalelo kwiimveliso ezintsha okanye iinkonzo ezivela kubathengi abathenga rhoqo okanye abameli abasebenza ngophawu kwimidiya yoluntu.
Fumana iindlela zokuyila zokubulela abathengi ngokundwendwela indawo yakho kunye nokuthenga.
Izixhobo zeWebhusayithi eziBalulekileyo kwiShishini lakho kwi-Intanethi
Njengomnini weshishini elikwi-Intanethi, kubalulekile ukuba ube nokufikelela kwiindidi ezahlukeneyo zolwazi ukuqala nokulawula iwebhusayithi yakho. Ezi zixhobo zilandelayo ze-intanethi zinokukunceda ngayo yonke into ekukhuseleni indawo yakho ngokubhalisa iimpawu zorhwebo ukuze zisebenze ngokukuko ngokuthenga iposi kwi-Intanethi:
IOfisi yeLungelo lokushicilela ngekhompyutha : Bhalisa umxholo wesiza sakho.
Inkonzo yangaphakathi yeNgeniso (IRS): Ukuphonononga iimfuno zokufayilisha kunye nexesha elibekiweyo; fikelela kwaye uprinte iifom.
IZiko leziKhalazo zoLwaphulo-mthetho kwi-Intanethi : Xela ubuqhetseba obenziwa kwi-intanethi kunye nokuxhatshazwa kwe-imeyile.
Patent ne-Ofisi yoRhwebo : Khangela indawo yogcino lwentengiso kwaye ufake isicelo sobhaliso lwentengiso.
S. Inkonzo yeposi : Shicilela ukuposa kunye neelebheli ezisuka kwikhompyuter yakho, thumela kwindawo okuyo, kunye nokufikelela kwezinye izixhobo kunye nezixhobo.
Ulawulo lweShishini elincinci Rekhoda (i-SBA): Fumana ulwazi ngezemali kunye nezicelo zemboleko.
Uluhlu lokutshekisha lokuSungulwa kweWebhusayithi eNtsha
Xa usenza iwebhusayithi, kuya kufuneka ugcwalise amanyathelo aliqela ngaphambi kokuba uthathe indawo yakho yokuhlala. Olu luhlu lokutshekisha lulandelayo lubandakanya iinkcukacha ezincinci kodwa ezibalulekileyo ukunceda ukuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho iyasebenza kwaye ibhenela abathengi bakho kwi-Intanethi.
Imephu yesiza-ubeko kunye nolwakhiwo lwawo onke amaphepha ewebhu-agqityiwe.
Imephu yesiza ifana namaphepha ewebhu-ngokuchanekileyo.
Iphepha ngalinye lewebhusayithi liyaboniswa kwaye liyafikeleleka ngokupheleleyo.
Yonke ikhonkco kuyo yonke indawo isebenza ngokufanelekileyo kwaye ivula iphepha elifanelekileyo.
Yonke imifanekiso, iifoto, kunye neevidiyo zilayisha ngokukhawuleza nangokugqibeleleyo, kwaye imifanekiso iyakhazimla kwaye icocekile.
Umxholo ukhululekile ukupela amagama ngendlela engeyiyo kunye neempazamo zegrama.
Ulwazi lwamaxabiso kunye nemveliso okanye iinkcazo zenkonzo zichanekile.
Amaphepha aneefom ezikwi-intanethi okanye ulwazi lobhaliso xa ucofa iqhosha lokungenisa, kwaye ulwazi luthunyelwa (kwifomathi echaziweyo) kwindawo ekunxibelelwa kuyo.
Iibhokisi zombhalo okanye iibhokisi eziwa ezantsi kwiifom nakwamanye amaphepha asebenza ngokuchanekileyo.
Amaqhosha okanye amakhonkco omsebenzi wenqanaba eliphezulu. La maqhosha, njengalawo abuyisela abasebenzisi kwiphepha lasekhaya, asebenza ngokufanelekileyo kwiphepha ngalinye.
Imiyalelo ekhethekileyo echazwe ngolwimi lokufaka iikhowudi (i-HTML okanye i-PHP, umzekelo) iboniswa ngokufanelekileyo xa kulayishwa indawo.
Iprosesa yekhadi letyala okanye enye inketho yenkonzo yokuhlawula isendaweni kwaye iyasebenza.
Yonke imisebenzi enxulumene ne-e-commerce, enje ngenqwelo yokuthenga, isebenza ngokuchanekileyo.
Iimpawu zobulungu okanye iilogo, ezinje ngeZiko eliNgcono leShishini okanye iChamber of Commerce, zifakiwe.
Imithombo yeendaba ekwabelwana ngayo kwimithombo yeendaba kwiTwitter, kuFacebook, kwiLinkedIn, kwiPinterest, nakwezinye iinethiwekhi zentlalo zikhuthazwa kumaphepha asebenzayo kuyo yonke indawo kwaye kulula ukuzibona
Indawo ivavanyelwe ukungqinelana kwesikhangeli kunye nokusonjululwa kwescreen.
Amaphepha ayaphendula kwaye indawo iboniswa ngokufanelekileyo kuzo zonke iifomati eziphathwayo.
Ulwazi loqhakamshelwano usebenzisa idilesi ye-imeyile yenkampani okanye inombolo yefowuni iboniswa ngokucacileyo kwaye kulula ukuyifumana.
Ubumfihlo, ukuthunyelwa, kunye nokubuya, kunye neminye imigaqo-nkqubo yokusetyenziswa ibonakala ngokucacileyo kwaye ifikeleleka ngokulula.
Isimboli yelungelo lokushicilela kunye nonyaka wangoku ubekwa ngokuqaqambileyo emazantsi ephepha ngalinye.
Sebenzisa iMithombo yeendaba yeNtlalo ukukhuthaza ishishini lakho
Intengiso yemidiya yoluntu yindlela engabizi kakhulu yokukhuthaza iwebhusayithi yakho kunye nokugcina abathengi abatsha nabasele bexoxa ngeshishini lakho. Nazi ezinye iingcebiso ezikhawulezayo nezilula zokusebenzisa ezinye zezona ndawo zidumileyo zokunxibelelana nabantu- i-Facebook, iTwitter, iYouTube, iLinkedIn, kunye nePinterest- ukunceda ukuqhuba umdla kunye nabathengi kwishishini lakho:
Misa iphepha leshishini ku-Facebook kwaye uthumele izibonelelo ezizodwa (ubuncinci kube kanye ngenyanga) kubo bonke abo bathanda iphepha lakho.
Cela abathengi ukuba babelane ngemifanekiso kwiphepha lakho le-Facebook elibabonisa besebenzisa imveliso abayithandayo abayithengileyo kwiwebhusayithi yakho.
Ukunciphisa umthwalo wakho ngelixa usandisa iinzame zakho zokuthengisa kuFacebook: Endaweni yokulawula zombini iphepha leshishini kunye nephepha lomntu, vumela nje ababhalisile kwiphepha lakho lobuqu likaFacebook. Imirhumo ikuvumela ukuba uthumele uhlaziyo lwasesidlangalaleni olunokujongwa ngababhalisi bakho. Ababhalisi banokuba ngabathengi, abathengisi, kunye naye nawuphi na umntu onomdla wokubona izithuba zakho zikarhulumente-njengoko benokwenza kwiphepha leshishini.
Sebenzisa i-Twitter ukuthumela iinyani ezinomdla okanye ezingaqhelekanga malunga neshishini lakho okanye iimveliso kunye nokubonelela ngekhonkco kwiphepha lemveliso kwindawo yakho.
Thumela iingcebiso ezifutshane nge-Twitter ngendlela yokusebenzisa iinkonzo zakho okanye iimveliso.
Landela abathengi kunye nabathengisi kunye neeblogi ezinempembelelo, intatheli, abahlalutyi beshishini, kunye nabanye abanolandelayo kunye nefuthe elibalulekileyo kwishishini lakho okanye kumzi mveliso.
Sebenzisa ii-tweets kunye namakhadi e-Twitter njengeendlela ezingabizi kakhulu zokubhengeza iimveliso zakho kwi-Twitter.
Fumana ukubonakala ngakumbi ngokuthumela imifanekiso kunye neevidiyo ezinxulumene nawe okanye ishishini lakho kubalandeli bakho.
Yenza isitishi seYouTube kwishishini lakho elikwi-intanethi, rhoqo ukongeza iividiyo ezimnandi neziluncedo, emva koko ukhuthaze abathengi ukuba babukele kwaye babelane ngevidiyo zakho nabanye.
Qalisa ukhuphiswano lwevidiyo: Cela abathengi ukuba benze iividiyo ezimfutshane zendlela abayisebenzisa ngayo imveliso okanye inkonzo yakho kwaye bazithumele kwiYouTube, emva koko abanye abathengi bavote kwiintandokazi zabo.
Veki nganye, thumela ividiyo emfutshane (emibini okanye engaphantsi) ividiyo yakho enika iingcebiso kubathengi bakho, ezinje ngokubonisa indlela yokusebenzisa imveliso oyithengisayo.
Cela abathengi ukuba bangenise ubungqina bevidiyo kwaye bazithumele kwisitishi sakho seYouTube.
Yenza iprofayile ye-LinkedIn kwaye ungeze amakhonkco kwiwebhusayithi yakho: Hlaziya iprofayile yakho ngekhonkco ezintsha, uphononongo lwemveliso, iincwadi okanye amanqaku owafundayo, okanye olunye ulwazi ukuze olu lwazi lubonakale kubo bonke abantu kwinethiwekhi yakho.
Joyina amaqela e-LinkedIn anokuthandwa ngabathengi bakho abaninzi, kwaye uhlala uthumela imibuzo okanye izimvo ezinxulumene neemveliso okanye iinkonzo ozinikezelayo.
Buza abathengi bakho kunye nabathengisi kunye nabanye oosomashishini abasebenza nabo kwinethiwekhi yakho ukuba banike ingcebiso kuwe okanye kwishishini lakho kwi-LinkedIn.
Yongeza iincwadana, iiPDF, iSlideShare kunye neMiboniso yePowerPoint, kunye neevidiyo kwiprofayile yakho phantsi kwecandelo leSishwankathelo ukubonelela ngomxholo onomdla onokuthi ukhutshelwe okanye wabelwe nguye nabani na ojonga iprofayile yakho.
Misela iprofayile yePinterest kwishishini lakho, ukwenza enye okanye ngaphezulu kweebhodi zePinterest ezinemixholo okanye umdla wemveliso onxulumene neshishini lakho.
Yongeza Ivenkile Khangela izikhonkwane kwizithuba zakho kwiPinterest ezidibanisa kwiwebhusayithi yakho ukuze kube lula ukuthenga imveliso nganye ebonisiweyo.
Xa uphonsa umfanekiso kwibhodi ePinterest, yongeza inkcazo emfutshane yokubhaliweyo ukunika ulwazi olongezelelweyo kunye nomdla.
Phina iividiyo kwiibhodi zakho. Eli thuba lisetyenzisiweyo lePinterest linokuvelisa izimvo ezininzi kunye nezikhonkwane ekwabelwana ngazo.
Bamba ukhuphiswano lokuphina kwiwebhusayithi yakho ngokukhuthaza abathengi ukuba bacofe umfanekiso wenye yeemveliso zakho kwiibhodi zabo zePinterest. Nika ibhaso elincinci nokuba liphi na isikhonkwane esingacwangciswanga, okanye ipini enezikhonkwane ezininzi.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-l glutamine
Ngaba i-metoprolol ibangela ukutyeba kobunzima
Uyithatha njani i-doxycycline
ungazitya iidiliya xa uthatha i-warfarin
Ngaba phentermine fda evunyiweyo
Itshathi yokulinganisa yabantu abadala ibuprofen